Google mechiri usoro APK n'ime Ọgọstụ ka ụzọ maka AAB | Gam akporosis
Google mechiri usoro APK n'ime Ọgọstụ ka ụzọ maka AAB
Onyeka Onwenu | | Ngwa gam akporo, Noticias
Mgbe anyị na ọtụtụ afọ biri, usoro APK ga-apụ n'anya Storelọ Ahịa Play maka ọnwa nke August. Google na-ejedebe ndụ ya mgbe oge amamihe gachara ma kpebie ịkpọsa AAB (gam akporo App Bundle), usoro ọhụụ nke ga-adịkarị obere karịa na mbụ ma ga-akwụsị ọtụtụ paireti.
Ndị mmepe chọrọ ịnọgide na-arụ ọrụ ga-adaba na AAB, maka nke a, ha ka nwere ihe dị ka ọnwa abụọ n'ihu. Ọ bụ oge amamihe, ọkachasị mara na mkpokọta ọhụụ ga-agbanwe n'ihe gbasara ụkpụrụ dị ugbu a.
1 Nghọta ka ukwuu
2 AAB na-alụ ọgụ megide paireti
3 Obere oru choro maka ntughari
4 Mgbanwe dị mkpa
Nghọta ka ukwuu
Dom Elliot, onye njikwa nke Google Play, na ntinye akwụkwọ ntinye aka na-akọwa na site n'ọnwa Ọgọstụ a gaghị anabata izipu ngwa APK. Nke a na-amanye gị ka ị jiri AAB, nke n'aka nke ọzọ ga-ogide ihe na-erughị eke APKs, ihe ga-belata nchekwa nke igwe.
Android App Bundle (AAB) ngwa na-ebelata nha site na 15%, nke n'ikpeazụ ga-adị mma maka ndị ahụ na-etinyekarị ngwa dị iche na ekwentị ha. Onye ọrụ ahụ ga - ebudata naanị ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na ụfọdụ akụrụngwa adịghị arọ dị ka ọ na - eme ruo ugbu a.
Onye ahụ ga-erite uru, ebe ọ bụ na ha ga-erite uru site na ihe nhazi na eserese nke ngwaọrụ mkpanaka, na-ebuteghị ọnụ na njedebe. A ga-ahazi ụdị a, ihe niile ọ bụrụhaala na ọ na-amata ngwaike, ya mere ọ dị iche na ekwentị dị obere na nke nwere ike dị elu.
AAB na-alụ ọgụ megide paireti
AAB (gam akporo App Bundle) ga-alụ ọgụ megide pairetiO siri ike maka ngwa na egwuregwu ị nwere onwe ha mgbe ha nwere ụgwọ sitere n'aka ndị nrụpụta. Maka nke a, a ga-eji faịlụ rụọ ọrụ n'ụzọ pere mpe na, n'agbanyeghị na amịpụtara ya, ọ gaghị adị mfe ịgbanwe ya.
Enweghi ike ịgụ ngwa a gbanwere na ekwentị ọ bụla, yabụ ọbụlagodi na ọ bụ ngwaọrụ hacked ọ gaghị akwado ya site na ama ọ bụla. Algọridim ga-egwu ọtụtụ ebe a, ọ bụ ya mere usoro AAB kụrụ Storelọ Ahịa Play, niile mgbe emechara ya na 2018.
Ndị na-emepe emepe nwere ọrụ dị n'ihu, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ imelite na mbubata ọrụ gị ọzọ ka ọ dị na ụlọ ahịa Google Play. A ga-achọ AAB ebe a, mana ọ bụghị na mpụga ụlọ ahịa ahụ, ọ bụ ya mere na a ga-anọgide na-ahụ usoro APK na ụfọdụ portals.
Obere oru choro maka ntughari
Google, site na blog post, na-ekwu na 'maka ọtụtụ ngwa, obere ọrụ achọrọ iji mepụta AAB kama ngwa. Ọ kachasị maka ịhọrọ nhọrọ dị iche na oge iwu wee nwalee nke a dị ka ihe nkịtị. Ngwunye ngwa ahụ bụ usoro ihe eji emeghe emeghe nke kwekọrọ na ngwaọrụ ndị bụ isi dị ka Android Studio, Gradle, Bazel, Buck, Cocos Creator, Unity, Unreal Engine, na injin ndị ọzọ. The Play Core Native na Play Core Java & Kotlin SDKs.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweela akụkụ ụfọdụ nke ngwa ọrụ ha ebupụtara na AAB, gụnyere ụfọdụ ndị akpọrọ Adobe, Gameloft, Duolingo, Netflix, redBus, Twitter na Riafy. N'ime ha, ọtụtụ ndị ọzọ ga-apụta n'ime ọnwa Julaị, na-enwe olileanya na n'ọnwa Ọgọstụ opekata mpe karịa 60%.
Ozugbo ịchọrọ ibudata faịlụ site na Storelọ Ahịa Play faịlụ a ga-abụ AAB kama APK, yabụ atụla anya ma ọ bụrụ na ịmalite ịhụ ya na Ọgọstụ. N'agbanyeghị enweghị ụbọchị ọ bụla, ọ ga-abụ n'izu mbụ nke ọnwa ahụ mgbe anyị ga-amalite ịhụ usoro ahụ.
Mgbanwe dị mkpa
Google arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ iji dochie APK na usoro AABỌ karịrị afọ atọ nke ule, ule na ndozi. Ọ bụ otu nzọụkwụ ọzọ maka ndị mmepe, ka ha chọrọ ịhụ ụgwọ ọrụ ha, n'ihi na ụfọdụ na-efunahụ nnukwu ego n'ihi paireti.
Companylọ ọrụ ahụ chọrọ imebi ụbọchị ole na ole mgbe ndị ụlọ ọrụ buru ibu hụla ndị mbụ, gụnyere microblogging social network Twitter, mana ọ bụghị naanị ya. Ndị ọzọ na-ama na-arụ ọrụ na-enwe ike tọghata si format ngwa ngwa iji nweta ya n'ime ihe karịrị otu ọnwa.
Nke a ga - ekwe ka ụlọ ọrụ rụọ ọrụ n'ụdị nke ga - enye ngwụcha na ogo ma baa uru maka ndị niile, gụnyere ya. Google na-ahụ AAB dịka ezigbo nhọrọ maka ndị mmepe niile, gụnyere ndị a kapịrị ọnụ ndị nwere ma ọ dịkarịa ala otu ma ọ bụ karịa ngwa egwu.
Enwere ike ịhapụ ụfọdụ ngwa, ha niile na-adabere na ma ha ga-emelite ịdị n'ime ma ọ bụ na ha agaghị agbanwe, ọ ka ga-ahụ etu nzaghachi mbụ sitere n'aka ndị mmepe n'ozuzu ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google mechiri usoro APK n'ime Ọgọstụ ka ụzọ maka AAB
Ndị ọzọ kachasị mma maka Tinder na 2021